Video qosolka ah
Qeybta:Sheekada Saameynta7 min akhris
Awoodda Xiriirka ee Qoobka
Wadahadal lala yeesho Toni Pierce-Sands iyo Uri Sands
Shan iyo toban sano ka hor, Toni Pierce-Sands iyo Uri Sands ayaa hibeeyey magaalooyinka mataanaha ah, ka dibna adduunka, TU qoobkaShirkadda qoob-ka-ciyaarka ee 10-ka ah oo ku faraxsan qaabka loo daboolay dabaaldegga iyo ujeedada, iyo dugsi ay jiilka xiga ee cayaaraha soo galaan xajistooda. TU Dance ayaa caan ku ah dhaqanka adag ee adag iyo kuwa kala duwan, farshaxan farabadan. Kudarinta shaqada waxay isku daraan waxa ay ku tilmaamaan qoob-ka-cayaar casri ah, baalal nadiif ah, dhaqdhaqaaqa Afrikaanka ku salaysan iyo kuwa magaalooyinka.
Labada duwo ayaa kor u qaadey baraha qoob-ka-cayaarka iyagoo ka go'an inay kala-duwanaanta iyo heerka ugu wanaagsan ee wax-soo-saarka, guddiyada, dugsiga, iyo studio. Dhawaan, Machadka "McKnight Foundation" wuxuu bixiyaa T Dance $ 225,000 saddex sano ka hor taasoo qayb ka ah ballan-qaadka barnaamijka farshaxanka ee dhaqaalaha sinaanta iyo taageeridda farshaxanada shaqada iyo shidaal ficil ah oo farshaxan oo kala duwan.
Gugii la soo dhaafay, shirkadu waxay iskaashi la sameysay farshaxanka abaalmarinta Grammy aduunka Justin Vernon iyo Bon Iver si loo abuuro Kaalay- Hadaad ku qeexdid "Qaadashada oo aad u qoto dheer, isku xirnaanta qoob-ka-cayaarka iyo muusikada casriga ah." Ka dib markii lagu soo bandhigay bandhigyada Tiyaatarka Sarre ee Saint Paul iyo Bowl ee Hollywood ee Los Angeles, Kaalay waxaa lagu qaban doonaa Tiyaatarka Paramount ee Seattle bishan December iyo Xarunta Kennedy ee Washington, DC bishii March 2019.
Sida uu u qoob-ka-cayaaray sannad-guuradii 15-aad, waxaannu dhawaan weydiisannay Seena Hodges si ay ula fariistaan Toni iyo Uri si ay uga fekeraan sida ay u bilaabeen shaqadooda iyo meesha ay qorsheynayaan in ay qaataan ta Dance Tance. Wareysiga soo socda ayaa la sameeyay si dherer iyo cad.
Toni Pierce-Sands iyo Uri Sands waa labada nin ee isqabaa labadaba kuwaas oo dhigaya T- (Toni) iyo U- Sawirka sawirka: Ingrid Werthmann
Seena: Kala hadal waxoogaa asalka ah ee Qoob-ka-ciyaarka.
Uri: Fikradda bilawga ah ee ah "Dance Dance" wuxuu ahaa mashruuc loo yaqaan Space.Tu.Embrace. Anigu waxaan lahaa xiiso dareenka ah ee aan rabo inaan ku daba galo, waxaanan soo ururinnay saaxiibaday si aan u caawino. Space.Tu.Embrace wuxuu ku saabsanaa sidii loo heli lahaa dariiqa nalooga abuurayo oo aan u horumarino shaqadeena.
Toni: Waxaan safar la bilaabay saaxiibadood. Bandhigyada qoob ka ciyaarka badankood waxay ka dhaceen Tiyaatarka Koonfureed xilligaas, laakiin waxaan go'aansanay inaan bilaabno yaryar. Waxaan ku gudubnay sanduuq madow oo 103-kursi ah oo Jaamacadda Minnesota ah muddo laba sano ah. Ka dib, at The Theatre Koonfurta iyo ugu dambeyntii, O'Shaughnessy. Waxaan ka dhignay dhagaystayaasheena qoyskeena iyo saaxiibadood.
Seena: Goormaad bilowday qoob ka ciyaarka?
Toni: Waxaan ahaa lix. Macallimiintii ugu horreeyey waxay ahaayeen Loyce Houlton. Waxaan xasuustaa fadhida dhulka iyo daawashada fasalka qoob-ka-ciyaarka. Marka ay timaado, way joojisay fasalka, wayna socotay, waxay i siisay gacanteeda oo waxay igu tidhi, "Ma jeclaan lahayd inaad nagu soo biirto?" Waxaan xusuustaa qaadashada gacanteeda aniguna marnaba dib uma eegin. Taasi waxay ii aheyd aniga.
Uri: Anigu waxaan bilaabay sidii qoob ka ciyaarka. Waxaan ku soo kordhay inta lagu guda jiray 80s ee xilligii qoob-ka-cayaarka markii hip-hop la sameeyay - guud ahaan dadweynaha iyo dhacdooyinka kumbuyuutarka. Tababarkeygii hore ee rasmiga ah ayaa bilaabmay markii aan 10 jir ahaa waxaana bilaabay inaan qaato fasalo balaadhan oo ah dugsiga hoose ee farshaxanka hoose ee Miami.
Seena: Markaad bilowdo Tu Dance, miyuu qoob-ka-cayaar ka ahaa magaalooyinka Twin Cities midab kala duwan?
Toni: Waxyaabo ayaa halkan ka socday iyo halkaa, laakiin ma aysan aheyn mid ku filan. Waxaa la ii soo diray sababtoo ah magaalooyinka mataanaha ah, xaqiiq ahaan, waxay noqdaan kuwo kala duwan oo ka badan tan aan ku arkay koritaanka halkan sida keli ah. Anigu kaliya ma arkeynin in qoob ka ciyaarka. Taasi waxay ahayd mid ka mid ah darawalada si loo abuuro qoob-ka-ciyaarka.
"Rajada aan u leeyahay Qoob-ka-ciyaarka waa in uu sii wado inuu koro si uu u gaaro dad badan, dadkana la qabsado, waxna ugu dhiso dhaqankeena badan ee deeqsi iyo deeqsi." -IQAALADAHA, SIDA CIIDAMADA IYO ARRIMAHA CO-ARTISTOR, TU DANCE
Seena: Ii sheeg khibradda abuurista Kaalay. [U fiirso: Uri wuxuu ka shaqeeyay buuggan inta uu dhameynayo qiradkiisa qalin jabinta.]
Uri: Abuuridda Kaalay wuxuu ahaa khibrad aan la rumaysan karin oo ah laba-laab. Labaad oo ka mid ah shuruudaha shaqadeyda cilmiga ah iyo waxa aan isku deyayay in aan wax ku ool ah ka abuuro. Meelahaasi waxay ahaayeen kuwo isku dhafan, laakiin sidoo kale gebi ahaanba waa kala soocaan. Waxaa jirey waqtiyo aanan xitaa aqoonsanin ama aan ogahay halka aan joogey. Ma ahaa abuuraha oo ahaa geedi socodkii qoraaga ama qoraaga oo ahaa geeddi-socodkii abuurista?
Toni: Kaalay waxaa loo malaynayay in lagu sameeyo Masraxa Palace oo la sameeyo, laakiin geedi-socodka hal-abuurka ah wuxuu ahaa mid aad u firfircoon oo aanan iska indha-tiri karin. Justin wuxuu ka shaqeeyey muusikada, TU Dance wuxuu ka shaqeeyay shaashadda, iyo kooxda qorshaynta waxay ka shaqeeyeen saadaalinta. Uri wuxuu abuuray shaqada iyo markii la qabtay, qoob-ka-cayaarayaashu waxay u qabteen Justin iyo kooxda. Hawlgalku wuxuu ahaa mid isbeddel ah, qof walbana wuxuu u eg yahay, "Oh, wow ... tani waa wax!" Kaalay wuxuu ahaa tallaabo weyn oo loogu talagalay shirkadda sababtoo ah shaqada lafteeda. Heerka farshaxanka aan abuuray waa mid aad u muhiim ah.
Seena: Maxaad ka bixin kartaa sidii aad labada qof ee wada-noolaha uga wada shaqeyn laheyd sida ninkeeda iyo xaaskiisa iyo asxaabteeda ururkaaga oo ah wakiillada farshaxanka 15-kii sano ee la soo dhaafay?
Uri: Waa mas'uuliyad aan caadi ahayn, sababtoo ah waa in aan garanno midba midka kale ee awoodaha badan leh mar walba. Sababtoo ah waxaan nahay labada fanaan oo ka madaxbannaan midba midka kale waxaanan dooranay inaan wadaagno nolosheena oo dhan, mararka qaarna khadadka ayaa laga yaabaa in ay dhibaan oo waa in aan masuul ka nahay sida aan ula dhaqmeyno labada dhinacba labadaba-labadaba shaqsi iyo xirfadba.
Toni: Sida naag, waxaan ogahay in wadaadku jiro. Iyadoo Uri uu yahay lab iyo naqshadeeye, taas oo si toos ah isaga u dhigeysa doorka ah inuu yahay "kan masuulka ah" ee indhaha dadka qaarkood. Anigu waan jeclahay, "waxaan ahaa qayb ka mid ah magaalada New York waxayna ku cayaaraysay Alvin Ailey, malab. Ha isku dayin! "[Qosol]. Laakiin Uri waan fahamsanahay in dhaqdhaqaaqa; sidii lammaane ahaan, waxaan kor u qaadeynaa isla markaana kordhinaa midba midka kale si isku mid ah. Waa wax aad u xun.
WA Qoob ka ciyaarka "Habboon". Sawirka Michael Slobodian.
Seena: Maxaad ka fekereysaa markaad ka fekereyso mustaqbalka Qoob-ka-cayaarka?
Toni: Waxaan ka fekereynaa haddii aan iibsanno dhismaha aan ku jirno oo aan cusbooneysiino ama aan iibsano ama dhisno meel kale. Waxaan jeclaan lahaa inaanu caymis caafimaad u fidinno qoob-ka-cayaaraha, mushahar sare oo ka socdo guddiga, tababara ardayda intiisa badan ee dugsiga, iyo abuurista fursado dalxiis oo dheeraad ah. Waxaan sidoo kale xiiseyneynaa sida barnaamijka isdhaafsiga uu saameyn ugu yeelan karo dugsiga. Waxaan si dhab ah diirada u saarnay dhismaha beesha, waqtigana waa waqtigii naloogu kordhin lahaa gaadiidkeena iyo bilawday inaan aragno qaran ahaan iyo caalamkaba.
Uri: Waxaan ka fekerayaa waxa ay qaadan doonto si ay u hesho meel ay ururka ku jiri karto, barwaaqoobi karto, oo u adeegto IYO inay noqoto mid ku filan inay bulshada ku quudiso iyada oo aan Toni iyo Uri. Aniga ahaan, "guusha" ee Qoob-ka-ciyaarka ee Tansaaniya waa in ay ka badan tahay Toni oo aan waligay sameyn karay. Rajada aan u leeyahay Qoob-ka-ciyaarka waa in uu sii wado inuu koro si uu u gaaro dad badan, dadkana la qabsado, iyo dhisida dhaqankeena badan ee deeqsi iyo deeqsinimo.
Seena Hodges waa aasaasaha iyo Agaasimaha Guud Tababaraha Wakaaga. Waxay ka caawisaa bini'aadamku inay noqdaan kuwa ugu fiican, ee ugu necebyahay naftooda hal wada sheekeysi waqtiga.
Sahamin Oktoobar 2019